Sawubona, i-intercom entsha yevidiyo ehlakaniphile evela ku-Nest | Izindaba zamagajethi
UJoseph Alfocea | | Ukuzenzakalela kwasekhaya
Ngesonto eledlule, inkampani yezobuchwepheshe iNest, ekhethekile kuma-thermostats kanye nokuqashwa kwe-smart home entsha, iqhubekele phambili ngokwethula uhlelo lwayo lokuqala lokuphepha lwabantu ababiziwe I-Nest Secure.
Kepha lolu hlelo lwezokuphepha, olwenziwe ngamadivayisi amathathu, aluzange lufike lodwa, kepha luhambisana neminye imikhiqizo emisha emibili. I- I-Nest Cam IQ Ngaphandle, ikhamera yokuqapha emelana nesimo sezulu, futhi Sawubona, i-intercom yevidiyo ehlakaniphile esizokhuluma ngayo ngokulandelayo.
Nest Sawubona, insimbi yomnyango esiyifunayo ekhaya
Insimbi entsha yomnyango we-smart video Sawubona Isidleke sine- Ikhamera ye-HD ngenkambu yokubuka ebanzi engu-160-degree kanye nekhono le-HDR elinikeza ikhwalithi yesithombe enhle kakhulu. Kepha futhi kuza nefayela le- imakrofoni yomsindo yezindlela ezimbili nesipika, ukuze umsindo uhambe kahle.
Iphinde ihlanganise i- indandatho eholwa ongakhanyisa ngawo umnyango wendlu futhi ngaleyo ndlela ubone kangcono ukuthi ngubani okuwo.
I-intercom entsha yevidiyo Sawubona uyakwazi thola ukuthi kukhona umuntu emnyangoekhaya, noma insimbi ingakhalanga. Ixhumana ngokusebenzisa I-Bluetooth ne-Wi-Fi usebenzisa isicelo samadivayisi eselula bese uthumela isaziso kumnikazi onesithombe sokuthi ngubani osemnyango. Kusuka lapho, umsebenzisi angakwazi ukugcina ukuxhumana nesivakashi, noma yikuphi, futhi ngokushelelayo. Futhi udlale umsindo ohleliwe kusivakashi sakho.
Futhi, uma ukhetha ukubhaliswa kwanyanga zonke ku-Nest Aware, ngo- $ 10 ngenyanga Sawubona uzokwazi uku khomba amalungu omndeni wakho, kanye nokuqoshwa kwevidiyo okungu-24/7 neminye imisebenzi eyengeziwe ehlobene neminye imikhiqizo yomkhiqizo.
Okwamanje intengo ezoba nayo insimbi yomnyango entsha ayaziwa Sawubona kusuka kuNest kepha esikwaziyo ukuthi izokhishwa eYurophu nase-United States ngekota yokuqala yonyaka wezi-2018.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ukuzenzakalela kwasekhaya » Sawubona, i-intercom yevidiyo ehlakaniphile entsha evela ku-Nest